हार्दिक बधाई: बेलायतमा नेपालकि छोरि सेलिना राईले पाइन‘इन्टरनेसनल इमर्जिङ इन्जिनियर अवार्ड’ ! – Life Nepali
हार्दिक बधाई: बेलायतमा नेपालकि छोरि सेलिना राईले पाइन‘इन्टरनेसनल इमर्जिङ इन्जिनियर अवार्ड’ !
लण्डन- बेलायतको लिड्समा कार्यरत एक युवा नेपाली इन्जिनियरले ‘इन्टरनेसनल इमर्जिङ इन्जिनियर अवार्ड’ जितेकी छन् । बेलायतसहित विश्वभरका इन्जिनियरहरु आबद्ध प्रोफेसनल संस्था ‘इन्स्टिच्युट अफ सिभिल इन्जिनियर’ (आइसीइ) ले सेलिना राईलाई यो अवार्ड प्रदान गरेको हो । *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
Previous Breaking – लकडाउनलाइ लिएर सम्पुर्ण नेपालीहरुलाइ सरकारबाट आयो अत्यन्तै खुसिको खबर !
Next Breaking : फेरि असोज ३० गते सम्म कडा लकडाउनको घोषणा: घर बाहिर निस्किन नपाइने !